Yaadannoo Baqqalaa Nadhii | Dhaamsa Ogeettii
Posted: Bitootessa/March 2, 2014 · Finfinne Tribune |
Taha Abdi (Xahaa Abdii) tiin | 15/02/2014
Obboo Baqqalaa Nadhii boqochuu gadda guddaaniin dhagaye. Boqochuun Baqqalaa Nadhii maatii isaa, firoota fi hiriyoota qofa biratti odoo hin taane, kaka’iinsaa fi falmaa mirga ummata Oromo argamsiisuu fi tiksuuf qooda guddaa inni gumaache murnoota beekan hundaaf gadda guddaadha.
Obboo Baqqalaa Nadhii sochii qabsoo bilisummaa ummataa Oromo keessattin bare. Dhiifama wajjin, qooda Baqqalaa Nadhii gahatti hubachuu haa gargaaruuf, daandii Baqqalaa fi murnoota isaa Walda Maccaa fi Tuulamaa jaaranii hoogganaa turan bira na geessen xiqqo yaadachuu fedha. Gaafan barnoota sadarkaa 1faa barachaa ture namoota lafa akka Aggaaro, Awash, Salaale, Baale fi Dawwe kanneen falmaa nam-tokkee fi tuutaa gaggeesan dhagayaa tiin ture. Gariin isaanii cunqursootaa fi abbootii qalaadaa hiyyeessa miidha turan diniinanii isa gorfamuu dide adaban fa’itu himamaa ture. Dammaqiinsi eenyummaa fi aadaa biqilee dagaaguu itti fufe. Gaafan barnoota sadarkaa 2ffaa gahu falmaan hidhannoo walitti dhaabbatte Baale keessatti jalqabuu dhagaye. Namoonni gariin wal-kakaasanii sochii sanitti hirmaachuuf bobbahuus dhagaye. Yeruma san maqaa Maccaa-Tuulamaa tiin sochiin Oromo guutuuf dhaabbate Shaggaritti jaaramee hojii jalqabuu dhagaye. Isa kana argadhee wajjin tahuu qalbiin na hawwite. Qilleensa kaka’iinsaa, sochii mirga dhal-namaa fi dimokraasii tiif falmuu kan 1960ta keessa Afrikaa guutuu bubbisetu Oromiyaas rooraasaa ture jechuudha. Tahus, biyya teenyatti wanti arr’a laaftuu fakkaattu baay’een jabeenya turte. Fakkeenyaaf, bara barnoota 1965/6 gaafan yuniversitii seene Shaggar dhufe Waldaa-Maccaa Tuulama argachuun qorannoo cimaa feesise. Hiriyaa achitti horadhetu marii dheertuu booda miseensa jaarmaya sanii tokkotti na geesse. Miseensi Maccaa Tuulamaa dura argadhe Guutaa Sirneessaa ti. (Guutaa Sirneessaa Bulchaa Shaggar tahee erga filamee “Ethiopian People’s Revolutionary Party ”-n, EPRPn, galaafatte.)
Guutaa Sirneessaa nama yeroo hanga tokkoof barsiisee barnootatti deebi’e, gamnaa fi beekaa ture. Gammachuun na simate walgahii jaarmayichaa tan itti aantu isa wajjin akkan dhaqu naaf hime. Yeroon gaafa geessu akka baalamannetti Gullalee galma Maccaa Tuulamaa na geeysee miseensota hedduu fi hoogganoota jaarmayaa wajjin tokko tokkoon wal na barsiise. Hoogganoota keessaa Baqqalaa Nadhii itti aanaa prezidentii jaarmayichaa tahuu fi nama biyya keessaa fi Kanadaa yuniversiitii McGill’tti seera barate, ammallee waajjira seeraa hiriyaa tokko wajjin banatee ofiif hojjachaa akka jiru naaf hime. Namoonni biraa kan gaafas wal na barsiisa Gen Taddese Birru, Haile-Maaran Gammada, Seifu Tasamma, Maammoo Mazammir, Kol. Alemu Qixxessaa, Col Qadiidaa Gonfaa fa’in yaadadha. Namoonni akka Baqqalaa fi hoogganoota kaanii maqaa Oromo maraa tiin sochii san adeemsisaa jiraachuun hamilee fi murannoo naaf haarayoomse. Seera barachuuf waanin hawwaa tureef ammoo, Baqqalaa Nadhii karaa kanaanis fakkii 2ffaa ol’aanaa naaf tahe.
Baqqalaa Nadhii Waldaa Maccaa Tuulamaa hoogganaa fi tika seeraa gochuun qoodni kenne himame waan dhumuu miti. Seerumti jaarmayni ittiin haa masakamuuf tumamee, sirnaan galmaawee ittiin hajjatamaa ture, yeroo sanitti gadfageenya yaadaa hangamii akka aammatee fi hojii ogeessi raaw’ate tahuu sirriitti nama hubachiisa. Seeraan dhibdee hawaasummaa fi politikaa furmaata soquu beekumsaa fi ogummaan tattaaffii godhamte san qoodni Baqqalaa Nadhii gumaache hiriyaa hinqabu.
1960ota keessa jaarmayni Maccaa Tuulamaa irree fi arraata Oromo hundumaa tokkicha tahuun ummata Oromoo hedduu sochoose, abdachiise. Sirna yeroo sanii jalatti seeraan jaaramanii sochii bifa sanii gochuun falmaa hidhannoo yeroo san adeemsifamaa turteen wal qabatee ummata kakaasuu fi kophattis dargaggeessa qabsootti hamilchiisuu dandaye. Waldaa Maccaa Tuulama dhalachuun fi hoogganoota akka Baqqalaa Nadhi argachuun, miseensota ummatoota ollaa Oromiya birattillee waan uume qaba. Dhaloonni ummatoota ollaa, fakkenyaaf lammoonni Sidaamaa, Yem, Walaytaa, Hararii (Adaree) fi kan birootis, waaltawuun sochii Oromo isaaniifis gaachena abdii taha jechuu dhaan, ifaan itti miseensoman. Hoogganni sirnaawaan Baqqalaa Nadhii waa’iloota isaa wajjin kennaa ture Oromoo fi olloota birattis gatii hangana hin jedhamne qabaachuu mamiin hin jiru.
Dhala-namaa lafe-qabeessa gaafni baran tokko gaafa biyyaa, gaafa rakkoon mudatte. Baqqalaa Nadhii dhimma ummataarratti hagam murataa akka ture gaafa mootummaan Hayle-Slaasee itti duultee hoogganoota baayyee hidhatti guurte, filmaata miseensaa tiin bokkuu hoogganaa ol-qabuu dhaan, gaafatama prezidentii fudhatee, miseensotaa fi ummata Oromo akka hamileen hin tuqamne taasise. Barsiisaa universiti kan ture Obboo Basazino Baayy’isaa gaafas barcuma itti aanaa prezidentiitti filamee ummataaf hojjachuuf Baqqalaa wajjin kakuu seene.
Gaafa Dargiin kufee mootummaan ceehumsaa tan Addi Bilisummaa Oromo itti hirmaate dhalatte dhimmoota seena-qabeessa mirkanaawan keessaa tokko qubeen afaan Oromoo seeraan raggaasifamee hojiirra ooluudha. Oromiya keessa manneen barnootaa, lafa hojii mootummaa fi iddoo biraa ittiin hojjatamuu jalqabe. Magazinootni fi gaazexoonni adda addaa baay’eenis mumul’achutti ka’an. Baqqalaa Nadhii magazinoota afuriif maxxansaa (publisher) tahuu afanuma isaa irraa hiin dhagaye.
1990ota keessa erga Addi Bilisummaa Oromo mootummaa ceehumsaa keessaa dhiibamee bahee miiddhaan qondaalotni Wayyaanee hojjatan takka bulchiinsa Oromiyaa handhura biyyattii Shaggar keessaa baasuu yaaluudha. Murtii Wayyaanee san ummanni Oromo jibbuu fi mormuu dhaan magaalaa Shaggar’tti hiriira guddaa bahe. Hiriira dhimma Oromiyaa guutuu rooraasee san namni hoogganee dhaamsa seena-qabeessa ummata Oromiyaa fi addunyaaf dabarse Baqqalaa Nadhii ti. Ergasiihis Baqqalaa Nadhii dandeettii isaa tiin mirga ummata Oromo tiksuu fi injifannoo irratti injifannoo dabaluuf carraaquu takkaa itti laafee hin beeku. Baqqalaa Nadhii jeynaa fi gamnoota Oromoyaa gurguddoo keessaatti lakkaawama. Jeyni du’us hojiin jeynaa hin-duutu, yeroo hundumaa jiraattuudha.
Warraa fi maatii akkasumas sabboonotaa fi ummata Baqqalaa Nadhii fi qooda inni gumaache beekan hundaaf jabeenyan hawwa. Baqqalaa Nadhii faarsuun dhimma ummataa kan inni jireenya isaa guutuu tarkaanfachiisaa ture fuul-duratti butuu fi galmaan gahuuf tokkummaa dhaan sochoohuu, hojjachuu, akka tahuun abdadha.//